Invertors, UPS and Voltage Regulators
General Electrical Equipments
Items 1 to 16 of 292 total
Earthing & Lightning Protection Solution
<p>A lightning protection system includesanetwork of air terminals, bonding conductors, and ground electrodes designed to providealow impedance path to ground for potential strikes. Lightning protection systems are used to prevent or lessen lightning strike damage to structures.<br></p>
<ul><li>A junction box is used in building construction and consists ofasquare box or housing that provides protection andasafety barrier for electrical connections. These boxes are made from metal or plastic and form part of your home or other building's electrical wiring system.</li></ul><p>Juntion Box&nbsp;</p><p>လူနေအဆောက်အဦများ စက်ရုံအလုပ်ရုံများနှင့် မီးလောင်ပေါက်ကွဲနိုင်သော ပါတ်ဝန်းကျင်အနေအထားရှိသည့် လုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေသည့် Junction Boxes များကို အသုံးပြုပါသည်။ ဝါယာကြိုးများအား ထိန်းချုပ်စနစ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုရာတွင် လိုအပ်သော ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။</p>
<ul><li>Stainless Steel Cable Ties are recommended for applications when added resistance to corrosion, chemical and weathering effects is required. They work effectively under the most extreme temperatures and severe environmental conditions.</li><li><li>Clamping Solution&nbsp;</li><li>လျှပ်စစ်ကြိုးများ ဆက်သွယ်ရေးကြိုးများသွယ်တန်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် မရှိမဖြစ် အသုံးပြုရသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။</li><li>လုပ်ငန်းသဘာဝအပေါ် အခြေခံ၍ အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္ဌာန် အမျိုးအစားများကွဲသော်လည်း အခြေခံအားဖြင့် သံမဏိ grade SUS 201,304,316 အစရှိသော ကုန်ကြမ်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။</li></li></ul>
Earthing & Lightning Protection Solution Accessories
<p>အဆောက်အဦများအား မိုးကြိုးပစ်ခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးရန်အတွက် မဖြစ်မနေတပ်ဆင်အသုံးပြုရမည့် မိုးကြိုးလွှဲစနစ်တွင် ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများ<br></p>
Early Streamer Emission (ESE) Air Termination Rods
<p>The radius of protection offered by an ESE lightning conductor is related to its height(h) to the area to be protected, to its triggering advance and to the protection level.</p><p>Technical Specification for the Active Lighting Air terminal rods radii of protection.</p><p><br></p><p>Product Specification:</p><p>- Provides active Lighting Protection Solution (LPS)</p><p>- Standards: NFC 17-102 / UNE 21186</p><p>- No external power supply required</p><p>- Recommended Air Terminal Height:2meters higher than objects (as per NFC 17-102)</p><p>- FRP Socket provides non conductivity between the ESF Air Terminal and Elevation / GI Pipe</p><p>- High End ratings of Protection radius 107m &amp; T 60&nbsp;</p><p>- Comprehensive installation</p><p>- Supports with G.I Pipe &amp; Base</p><p>- Optional accessories of strike counter &amp; testing meter available</p><div><br></div>
Cable Lugs & Wire Connectors
<p>Cable lugs are devices used for connecting cables to electrical appliances, other cables, surfaces, or mechanisms. The clamps that connect wires to an automotive battery areacommon example ofacable lugs, as are the ends of battery jumper cables.</p><p>ဝါယာကြိုး၏အဆုံးသတ်ဖြစ်သော Junction Boxes,panel , Electrical device များတွင် လုံခြုံစိတ်ချစွာ တပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုရသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။</p>
26000 ~ 26000 Kyats
<p>Over 10 years of Experience, Proper Cable Management, Configuration Expect, Free Technical Support, Free On Sit Survey Installation Price Included Accessories, Configuration, Termination and Cabling Charges.</p>
Garrett Super Scanner V Hand Held Metal Detection
Key Features - Ultimate sensitivity: detects medium sized pistol from 9&quot; distance; large knife from 6&quot;; razor blades and box cutters from 3&quot; distance; foil-wrapped drugs and tiny jewelry from 1&quot;. - Self-calibrating: digital microprocessor technology eliminates the need for periodic sensitivity adjustments. - Rugged, high-impact ABS case with reinforced coil compartment. Exceeds Mil-Std-810F (drop test) Method 516.5, procedures II and IV. - Large 8&quot; scan surface for quick, thorough scanning. - No tools required to change standard 9V battery (included). Optional rechargeable battery kit available. - Sharp audible alarm and bright red LED indicates the detection of metal. - Momentary push button helps temporarily eliminate detection of nearby ambient metal such as rebar, metal walls. - Three-color LED indication: Green LED indicates ON; Amber LED indicates LOW BATTERY: Red LED indicates ALARM. - Operating temperatures: -35° F (-37° C) to 158° F (70° C)
Dahua CCTV DH-IPC-HDB4200F-PT
&gt;1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS &gt;H.264 &amp; MJPEG dual-stream encoding &gt;Max 25/[email protected] &gt;Day/Night(Electronic), 3DNR, AWB,AGC,BLC &gt;Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) &amp; DMSS &gt;Max 100°/s preset speed, ±180° Pan range, 90°Tilt range &gt;3.6mm fixed lens &gt;Micro SD memory, IP66, IK10 လူကြီးမင်းတို့၏ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံ၊ အိမ်များကို ၂၄နာရီပတ်လုံးစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Dahua CCTV လုံခြုံရေးသုံးပစ္စည်းကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။
Features &gt;1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS &gt;H.264&amp;MJPEG dual-stream encoding &gt;25/[email protected](1280×960) &gt;DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC &gt;Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) &amp; DMSS &gt;3.6mm fixed lens (2.8mm optional) &gt;Max. IR LEDs Length 30m &gt;IP67 &gt;Micro SD card slot, up to 128GB &gt;Easy4ip cloud support &gt;Wi-Fi support
လုပ်ငန်းသုံး Walkie - Talkie
ဒီ လမ်းလျှောက်စကားပြောစက်လေးကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များမှာ အသုံးများကြလို့ ကျွန်တော်တို့ စီမှာ ရရှိနိုင်ကြောင်းကြေငြာလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ စီးပွားရေလုပ်ငန်းများအတွက် အထူးသင့်တော်သော လမ်းလျှောက်စကားပြောစက်များဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ဒိုတိုက်များ၊ အဆင့်မြင့် အဆောက်အအုံများ၊ အစိုးရ အဆောက်အအုံများ၊ လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းများ နှင့် အစိုးရဝန်ထမ်းများ အသုံးပြုကြသော စကားပြောစက် အမျိူးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အသံကြည်လင်ပြတ်သားမှု ၊ အကွာအဝေး များများ အသုံးပြုနိုင်မှု နှင့် အရွယ်အစားသေးငယ်သောကြောင့် အလွယ်တကူ သယ်ယူကိုင်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့် အသုံးပြုရ အဆင်ပြေချောမွေ့စေသည်။ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာစေသည်။ တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး အချိတ်ဆက်မိမိ နှင့် အချိန်တိုအတွင်း အလုပ်ပြီးမြောက်အောင် ကူညီပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်လည်း အသင့်တင့် ရှိသောကြောင့် အခုပဲ သင့်လုပ်ငန်းများကို Work Smart စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲလို့ရနေပါပြီ ခင်ဗျာ။
Fingerprint System Time Attendance Machine
n addition to the device, this package includes the following items: Printed documentation and software CD Accessory package ID card (only for the device with RFID function
အဝေးထိန်း သူခိုးဖမ်း/ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးစက် (PIR MP.ALERT A9)
38000 ~ 38000 Kyats
Warranty6month ရေ၊ဆီ၊သဲဝင်ခြင်း၊ ဆီးလ်ပျက် နေခြင်း၊ လွတ်ကျကွဲရှကျိုးပဲ့ခြင်း၊ ဖွင့်လှပ်ပြုပြင်ထားခြင်း တို့မှလွဲ၍ ၆လအတွင်း ပျက်စီးချို့ယွင်းပါက အခမဲ့ ပြုပြင် လဲလှယ်ပေးပါမည်။ 2G GSM Sim Card ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုရသော ကမ္ဘာတဝှမ်း တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေသည့် လုံခြုံရေး စက်ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ယခင်နှစ်များက burglar alarmဟု ခေါ်ဆိုသည့် GSM Sim Card ထည့်သုံးရသော စက်များ သုံးခဲ့ကြသော်လည်း အရွယ်အစား အလွန်ကြီးမားသည့်အတွက် တိတ်တဆိတ် ဝှက်၍ တပ်ရန် အဆင်မပြေခဲ့ပါ။ ယခု PIR A9 ဆိုသည့် စက်လေးမှာ burglar alarm မှ Setting အားလုံးနီးပါး ပါဝင်ပြီး အရွယ်အစားမှာလည်း မီးခြစ်ဆံဗူး၏ တဝက်မျှ သာ ရှိသောကြောင့် အလွန်ပင် လူကြိုက်များ အသုံးများ လာကြပါသည်။ ဘဏ်တိုက်၊ မီးခံသေတ္တာ၊ အထူးကြပ်မတ်ခန်း၊ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းထားရာဂိုဒေါင်၊ လျှို့ဝှက်ခန်း၊ အပြင် လူစိမ်းမဝင်စေလိုသောအခန်းတို့တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး တဦးတယောက်ဝင်လာသည်နှင့် ၎င်းစက်လျို့ဝှက်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် မိမိ၏ ဟမ်းဖုန်းကို (ဖုန်းလိုင်းမိသော မည်မျှဝေးသည့်နေရာဒေသသို့မဆို) ချက်ချင်းဖုန်းခေါ်ပေးပြီး ၎င်းစက်အနီးတဝိုက် (၁၅မီတာ) ၄၅ပေခန့်ပတ်လည်မှအသံများကို ကြားနိုင်ပြီး မည်သူဝင် လာသည် မည်သည့်စကားများပြောနေသည်ကို သိရှိနိုင်သဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ လုပ်သင့်သည့် ကိစ္စများကို လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ တံခါးပေါက်ဝအနီးတွင် လျှို့ဝှက်တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ၎င်းစက်နှင့် ၁၂၀° ထက်အောက် ဘယ်ညာပတ်လည် အကွာအဝေး ၅မီတာအထိ လူဖြတ်သွားသည်နှင့် သိနိုင်သော အလွန်အားကောင်းသည့် sensitivit ဖြစ်သော motion sensor ပါရှိပါသည်။ လူ၏ ကိုယ်အပူရှိန်၊ လူ၏ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား လှုပ်ရှားမှုကိုသာ sensor က အတည်ပြု ဖုန်းခေါ်ပေးသောကြောင့် အခြားသော ကြောင်၊ ကြွက် တိရစ္ဆာန်များ ဖြတ်သန်းရုံဖြင့် ဖုန်းခေါ်နေမည်မဟုတ်ပါ။ Operating frequency ; 850Mhz.900Mhz.1800Mhz.1900Mhz အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 3Gစနစ်ဖြစ်သော Ooredoo မရပါ။ mpt / telenor GSM သာ ရပါသည်။ ဘတ္ထရီအားအပြည့်သွင်းထားပါက လူဖြတ်သန်းမှုရှိလျှင် ၅ရက်မှ ၇ရက်အထိ၊ မရှိလျှင် ၁၅ရက်မှ ရက်၂၀အထိ standby ထားနိုင်ပါသည်။ ဆိုက်ဒ်အရွယ်အစား အလွန်သေးငယ်ပြီး 4.5 x 3x 1.4cmသာ ရှိပါသည်။ Standby အနေအထားတွင် 0.05mA၊ ဖုန်းခေါ်လျှင် 10mA သာ စွမ်းအင်အသုံးပြုရ သောကြောင့် ဘတ္ထရီအားစား အလွန်သက်သာပါသည်။ အသုံးပြုနည်း 	စက်ကို ၃/၄နာရီခန့် အားပြည့်အောင်သွင်းပါ။ 	2G GSM card ကို ထည့်ပါ။ ပါဝါဖွင့်စရာမလိုပဲ sim card ထည့်ရုံဖြင့် ပါဝါဖွင့်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ 	ထည့်ထားသည့် Sim Card နံပါတ်ကို မိမိ၏ ဟန်းဖုန်းဖြင့် ခေါ်ကြည့်ပါ။ အလိုအလျောက် (Auto Answer) ဖုန်းကိုင်ပါလိမ့်မည်။၎င်းအနီးတဝိုက် ၄၅ပေအတွင်းမှ အသံများကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ကြားနိုင်ပါသည်။ 	Sim Card နံပါတ်သို့ 1111 ဟု မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ။ ထိုအခါ Sensor စတင်အလုပ်လုပ်ပါပြီ။ ၎င်းရှေ့မှ တစ်စုံ တစ်ယောက် ဖြတ်သွားသည်နှင့် မိမိ၏ ဟန်းဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဖြတ်သွားသည့် အကြိမ်တိုင်း ခေါ်နေပါမည်။ ၎င်းစက်မှ နံပါတ်ဖြင့် ဖုန်းcall ဝင်လာလျှင် အခန်းထဲ တစ်ဦးတစ်ယောက် ဝင်နေကြောင်း သိနိုင်ပါပြီ။ 	အခန်းပိတ်ထားချိန်မဟုတ်ပဲ လူဝင် လူထွက်များသည့်အချိန်တွင် 0000 ဟု မက်ဆေ့ခ်ျပြန်ပို့ထားပါက ဖုန်းCall ခေါ်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ 	motion &amp; temperature ၂မျိုးလုံးက်ို ခြေရာခံနိုင်သော sensor ဖြစ်သောကြောင့် လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ် မြင်မှသာ ဖုန်းခေါ်ပေးသည်မဟုတ်ပဲ စက်ကို ကပ်ထူပြား၊ ပလပ်စတစ်ပြားတို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားလျှင်လည်း ၎င်းရှေ့မှ လူဖြတ်သွားလျှင် လူ၏ အပူရှိန်ကြောင့် sensor က သိရှိအတည်ပြုပြီး ဖုန်းခေါ်ပေးပါမည်။ လုံခြုံရေးညစောင့်ငှားသည်ထက် ကုန်ကျစားရိတ် များစွာ သက်သာခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း မေ့လျော့ခြင်းမရှိတတ်သည့် စက်ဖြစ်သောကြောင့် 90%ထိ စိတ်ချရခြင်း၊ ဖုန်းခေါ်ပေးရုံသက်သက် ဖြစ်သောကြောင့် ကိုင်နားမထောင်လျှင် ဘီလ်မကုန်ခြင်း စသည့် အားသာချက်များ ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်တစားဖြင့် မရှင်းလင်းသည်များကို မေးလိုပါက (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်း မှာယူလိုပါက 09- 777918199, 09- 777918211 တို့ကို ဖုန်းဆက်၍ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံတ်၊ မြို့နယ် နှင့် မှာယူလိုသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် တို့ကို မေးမြန်း မှာယူနိုင် ပါသည်။ ဆိုင်မှာ လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှု စမ်းသပ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှ ဝယ်ယူလည်း ရပါသည်။ နယ်များမှ မှာယူလျှင် ဘဏ်မှ ငွေကြိုလွှဲရပြီး ငွေလက်ခံရရှိမှသာ ကားဂိတ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါ သည်။
BaganMart.com is right place for Electrical equipments in Myanmar. You can buy or sell Wire &amp; Accesssories,Motor &amp; Generator,Transformers &amp; Power Supplies,Electrical Components,Circuit Breaker,Invertors,UPS,Voltage Regulators,Lighting Products,Sola &amp; Batteries and General Electrical Equipments in Myanmar.If you cannot find what you want, you can post buying offer in relevant categories such as&nbsp;Dynamo,cable,etc.., in Myanmar.&nbsp;Many suppliers will send you quotations. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.